WeekToDo, planner isan-kerinandro hanoratana zavatra | Ubunlog
WeekToDo, drafitra isan-kerinandro hanoratana zavatra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny WeekToDo isika. Ity dia a planner isan-kerinandro, izay kely indrindra ary maimaim-poana amin'ny asantsika. Fandaharana iray izay hanome antsika fahafahana hanatsara ny fahavokarantsika amin'ny alalan'ny famaritana sy fitantanana ny herinandro sy ny drafitry ny fiainantsika, amin'ny fomba mora sy intuitive.
Raha liana amin'ny programa momba ny mandamina tsara kokoa ny herinandronao amin'ny fampiasana PC, mety hahaliana anao ity programa ity. Ao amin'ny rafitra Ubuntu dia hanana safidy hihazona ity programa ity isika noho ny fonosana snap sy ny fonosana .DEB natolotry ny mpamorona azy.
Amin'ity rindrambaiko ity dia nokarohina ny fiarovana ny angon-drakitra mpampiasa dia tsy levona. WeekToDo dia mifantoka tanteraka amin'ny fiainana manokana, ary izany dia satria ny angona rehetra dia hotehirizina ao amin'ny solosainay. Ity programa ity dia tetikasa maimaimpoana tanteraka azon'ny rehetra. Azo ampiasaina amin'ny rafitra fiasana desktop na navigateur web izy io.
1 Ny endri-javatra ankapoben'ny WeekToDo
2 Mametraka WeekToDo amin'ny Ubuntu
2.1 Toy ny fonosana haingana
2.2 Toy ny deb package
Ny endri-javatra ankapoben'ny WeekToDo
Izy io dia programa lampihazo miampita.
Ny interface dia hanolotra antsika toro-hevitra momba izay azon'ity programa ity atao.
Hamela antsika manondrana na manafatra ny lisitray, mba hananana azy ireo foana.
Afaka mampiasa a lisitra fanao mahazatra.
Ny programa dia hamela antsika ihany koa tariho ary arotsaka ny asa mba ahafahantsika mandamina azy ireo araka izay tiantsika.
Ny interface dia azo adika amin'ny fiteny samihafa, anisan'izany ny Espaniola.
Afaka mamorona isika subtasks.
Izy io koa dia misy fanohanana ny Markdown.
Hanome antsika ny mety ho ovay ho maizina ny lohahevitra mazava.
Ny interface an'ny mpampiasa dia azo ovaina. Izany dia ahafahantsika mahita andro maromaro na vitsy kokoa, mijery ny kalandrie na zoom in na out.
Ny fitahirizana dia atao eo an-toerana.
Mametraka WeekToDo amin'ny Ubuntu
Raha izany no tianao andramo ity programa ity amin'ny navigateur web, tsy misy fametrahana na inona na inona, afaka mandeha any amin'ireto manaraka ireto ianao adiresy tranonkala.
Toy ny fonosana haingana
Raha liana amin'ny fametrahana ny programa WeekToDo ao amin'ny Ubuntu ianao dia azonao atao ny mampiasa azy io snap pack. Mba hanatanterahana ny fametrahana miaraka amin'ity karazana fonosana ity dia tsy maintsy manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T), ary mametraka ny kinova farany navoakan'ny programa mampiasa ity baiko manaraka ity:
Raha amin'ny fotoana hafa, rehefa navoaka ny fanavaozana fandaharana, dia liana izahay havaozy izany, mila mampiasa ny baiko fotsiny ianao:
Aorian'ny fametrahana dia afaka isika atombohy ny programa avy amin'ny menio Applications, na avy amin'ny hafa app launcher izay misy ao amin'ny ekipanay. Izany koa dia ahafahantsika manomboka ny programa amin'ny fanoratana amin'ny terminal:
Para esory ny programa WeekToDo napetraka ho fonosana snap, tsy maintsy manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary ampiasao ny baiko fanesorana aseho eto ambany:
sudo snap remove weektodo
Toy ny deb package
Mba hametrahana ity programa ity ho fonosana .DEB ao amin'ny Ubuntu dia tsy maintsy misintona ilay fonosana avy amin'ny pejy mamoaka an'ny tetikasa. Ho fanampin'izany, raha misintona ny dikan-teny farany navoaka androany, dia afaka manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ihany koa isika ary mihazakazaka wget ao aminy toy izao manaraka izao:
Rehefa vita ny fampidinana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny lahatahiry izay nametrahanay ny rakitra, ary hametraka azy amin'ny alalan'ny mihazakazaka ao amin'ilay terminal ihany ny baiko:
sudo apt install ./WeekToDo_1.4.0_amd64.deb
Amin'ny fiafaran'ny fametrahana dia afaka mikaroka ny mpandefa fandaharana amin'ny rafitray izahay atombohy ny programa.
Raha mahaliana anao ianao esory ity rindrambaiko ity, dia ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary soraty ao:
sudo apt remove weektodo
Amin'izao fotoana izao, ny famitana ny asantsika tsy tapaka dia mety mitaky drafitra sy fandaminana tsara, mba tsy hanadinoanao azy ireo na hahafeno fe-potoana. Amin'ny ankapobeny, fitaovana fototra io izay azon'ny mpampiasa hitodika rehefa tojo olana isika rehefa manao laharam-pahamehana sy mandamina ny asantsika, na mifandray amin'ny trano na ny orinasa. Noho ny GUI tsotra sy intuitive, na ireo mpampiasa kely na tsy manana traikefa aza dia afaka mandray soa avy amin'ity rindrambaiko ity.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ity programa ity, ny mpampiasa dia afaka mandeha any amin'ny tranokalan'ny tetikasa na ny azy tahiry ao amin'ny GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » WeekToDo, drafitra isan-kerinandro hanoratana zavatra
KiCad 6.0 dia efa navoaka ary tonga miaraka amin'ny fanatsarana fanavaozana
Linux 5.16-rc7 dia tonga tony sy kely, andrasana amin'ny Krismasy, saingy mety hanana rc9